Apr 10, 2018 |0comment
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lee Sang-hwa အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၁၀ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် ကိုရီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H. E. Mr. Lee Sang-hwa အား ယနေ့...
Apr 04, 2018 |0comment
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Vanessa Chan အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၄ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် စင်ကာပူနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Vanessa Chan အား ယနေ့...
Apr 02, 2018 |0comment
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး ကြော်ငြာစာအမှတ်-၁/၂၀၁၈ (လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး ကြော်ငြာစာအမှတ်-၁/၂၀၁၈ (လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း) ၁။ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနှင့် ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်တို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဥပဒေအရာရှိအဆင့်-၄(လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးနေရာများအတွက် အမျိုးသား ၇၅ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး...
Mar 29, 2018 |0comment
နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၂၉ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် Open Society Myanmar Foundation မှ...
Mar 22, 2018 |0comment
နေပြည်တော်၊ မတ်လ ၂၂ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဥပဒေအရာရှိများ၊ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိများ၏ စတုတ္ထအကြိမ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် (၉:၃၀)...